Na-agba izu nke ndị nzuzu: onye dere ya, ihe ọ bụ na curiosities | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Conjuju nke ceciuos
Gụtụla Conjuju nke ceciuos? Yoù ma ihe ọ bụ? Ikekwe ọ bụ oge ahụ ị na-agụ akụkọ nke ị na-atụle etu ndị mmadụ si ebi ndụ na otu ha si eme ya ugbu a, akwụkwọ akụkọ nke onye ode akwụkwọ na-echekwa na ya erughị eru.
Ya mere, anyị ga-akọghachi gị, n'ezie na-agwaghị gị njedebe, ihe niile ị ga-ahụ n'akwụkwọ a.
1 Onye dere izu ọjọọ nke ndị nzuzu
2 Gịnị bụ izu ọjọọ nke ndị nzuzu
2.1 Nkọwa nke akwụkwọ
3 Kedu ụdị na usoro ya
Onye dere izu ọjọọ nke ndị nzuzu
Isi mmalite: Diariosur
Onye edemede onye anyi ji ugwo Nke ndi nzuzu bu John Kennedy Toole. A mụrụ ya na New Orleans na 1937 wee nwụọ ka afọ 31 gasịrị, na 1969. E bipụtaghị akwụkwọ ya mgbe ọ dị ndụ, mana edepụtara ya mgbe ọ nwụsịrị (na 1980) wee nata Pulitzer Prize maka akụkọ ifo na 1981.
John bụ nwa John na Thelma Toole, ndị nne na nna na-echebe nwa ha nwoke, ọkachasị nne ya, onye na-enweghị ike ịhapụ ya ka ya na ụmụaka ndị ọzọ na-egwuri egwu. Nke ahụ mere ka ọ gbanwee ọmụmụ ya ma bụrụ nwa akwụkwọ kwesịrị nryomi. Ọ gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Tulane ma gụchaa BA na Bekee na Columbia. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ malitere ịrụ ọrụ dị ka osote prọfesọ nke asụsụ Bekee na Mahadum Southwest Louisiana otu afọ.
Site ebe ahụ ọ gara New York, ịnọrọ ọnọdụ nkuzi na Hunter College.
Otú ọ dị, ọ kwụsịghị ọrụ ya maka ọzụzụ, ebe ọ gbalịrị inweta akara doctorate. Agbanyeghị, inwe ịga ndị agha, ebe ọ nọrọ afọ abụọ na-akụziri ndị na-asụ asụsụ Spanish asụsụ Bekee, mere ka ọ hapụ ya.
Mgbe ọ lọtara agha ahụ, ọ gara biri na New Orleans ebe ya na ndị mụrụ ya biri wee bido ịrụ ọrụ na Dominican College. Agbanyeghị, ọ nyekwaara ndị enyi ya aka (dịka ọmụmaatụ site na ire tamales) ma ọ bụ, mgbe ha gụsịrị akwụkwọ na nsọpụrụ na Mahadum Tulane, na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ uwe nwoke.
Ihe a niile ka o jidere n’akwụkwọ ya, The Conspiracy of Fools, mgbe ọ mechara ya, o zigara ya ụlọ obibi akwụkwọ Simon & Schuster. Ma a jụrụ nke a n'ihi na "ọ bụghị n'ezie ihe ọ bụla." Mgbe ahụ Toole malitere inwe nkụda mmụọ. Ọ toụrụ mmanya, kwụsị ọrụ wee mechaa gbuo onwe ya mgbe ọ dị afọ 31.
Ọ bụ nne ya lụrụ ọgụ mgbe ahụ ka mmadụ gụọ ọrụ nwa ya nwoke. Na onye ahụ bụ Walker Percy onye ike gwụrụ na-ekwusi ike, mere ya, na-enwe obi ụtọ na akwụkwọ ahụ. N'ihi ya, Percy bụ okwu mmalite nke akwụkwọ ahụ. N’ihi ihe ịga nke ọma a, a napụtara akwụkwọ akụkọ ọzọ nke onye dere ya dere mgbe ọ dị afọ 16, bụ nke ọ lere anya dị njọ, Akwụkwọ Neon.
Gịnị bụ izu ọjọọ nke ndị nzuzu
N'ime izu ọjọọ nke ndị nzuzu ị ga-ahụ a onye bụ isi, Ignatius J. Reilly. Nwoke a bu onye ekwesighi ekwesi na anachronist. Ọ ga-ahụ n'anya ibi ndụ nke ochie, yana ụzọ ibi ndụ ya, omume ya, wdg. Ya mere, maka ụwa dum ịnụ, ọ na-eme mkpebi ide ọtụtụ narị akwụkwọ edetu ebe ọ na-ekpughe ọhụụ ahụ nke ụwa. Akwụkwọ ndetu ọ bụla na-ewere ohere n’ime ụlọ ya, n’enweghị iwu ọ bụla, n’agbanyeghi na o nwere ebumnuche siri ike ịtụ ha. Otu ụbọchị.
Nye ya, ọrụ bụ ihe jọgburu onwe ya, ihe a ga-ata ahụhụ n'ihi na ụwa bụ onye isi obodo na nke ọ na-ewere dị ka ụdị ịgba ohu. Ya mere, o mechara jiri onwe ya tụnyere Boethius (onye nakweere igbu ya) wee malite ịchọ onye ọ ga-adị ndụ. Site kwa na akụkọ a na-akọ na, n'agbanyeghị na ọ ga-eme ka ị chịa ọchị nke ukwuu, ọ ga-egosikwa gị n'ụzọ gabigara ókè, otu ọha mmadụ taa dị: site na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, obi ọjọọ, mwute ...
Na nkenke, ee, ị ga-achị ọchị na akwụkwọ ahụ, mana ị ga-enwekwa obi ebere ịhụ etu ụwa siworo dịrị na otu tupu nke a adịghị otu ahụ, ma ọ bụ ụkpụrụ nke na-achịkwa ya ugbu a ọ dị ka anyị niile agbasoro n'usoro na- «imeghari” na-otu nke ọha mmadụ.
Nke a bụ nkọwa ya:
Conjuration Of Fools bu ihe nzuzu, acid na akwukwo ọgụgụ isi. Mana ọbụghị naanị nke ahụ, ọ dịkwa oke ọchị ma dịkwa ilu n'otu oge ahụ. Ọchị gbapụrụ n'onwe ya tupu ọnọdụ adabaghị adaba nke oke egwu a. Ignatius J. N’ezie bụ otu n’ime ndị kacha mma e kere eke na ọtụtụ ndị anaghị ala azụ iji atụnyere Don Quixote. Ọzọkwa, ọ bụ onye na-emegide iwu zuru oke maka akwụkwọ edemede jupụtara na ndị mara mma, edobere na ọdụ ụgbọ mmiri nke New Orleans, bụ ezigbo Ignatius.
Aghọtaghị ya, onye dị afọ iri atọ nke bi n'ụlọ nne ya na onye na-agba mbọ inweta ụwa ka mma n'ime ụlọ ya. Mana obi ọjọọ ga-adọkpụrụ ya ka ọ na-awagharị n'okporo ámá ndị dị na New Orleans na-achọ ọrụ, na-amanye ịbanye na ọha mmadụ, nke ya na ya na-enwe mmekọrịta nke ịsọ oyi, iji nwee ike ịkwụ ụgwọ mmefu nne ya kpatara n'ihe mberede ụgbọ ala Anọ m na-a drivingụbiga mmanya ókè. Onye edemede, John K. Toole, na-enweta nyocha nke etiti.
Ọ na-achịkwa iji nọgide na-enwe mmasị nke onye na-agụ ya (ọbụlagodi na ọgụgụ nke abụọ karịa nke mbụ) nwere ọtụtụ odide ndị na-adịghị mma. Ọ hapụghị obere nwa nkita nwere isi yana, site na Ignatius 'omume aghụghọ na nke rụrụ arụ, ọ na-enye nyocha oge ọ dịrị ndụ na okwu ịkwa emo nke dị iche na ọhụụ dị mwute nke ndụ ndị e gosipụtara. Anyị achọtaghị akụkọ nzuzu na nke na-akpasu iwe nke nkatọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mana nkata ahụ sitere na mmalite. Oge nke, dị ka onye na-agụ akụkọ ya kwuru, Fortuna na-agbanye ụkwụ ya ala ma anyị amaghị ihe dị ịtụnanya na ọdịnihu na-echere anyị.
Site na ebe a, ọnọdụ ụfọdụ esoro ndị ọzọ, dị ka ihe odide ahụ na-eme, ma a kpụrụ nnukwu snowball nke ga-emesị gbawa na njedebe akwụkwọ akụkọ ahụ. Mgbe ọ gụchara akwụkwọ akụkọ La Conjura De Los Focios, mgbe ọ dị afọ iri atọ na abụọ, onye ode akwụkwọ gbara mbọ ka ebipụta ya n’enweghị isi. Nke a kpatara oke ịda mba nke dugara igbu onwe ya. N'ihi nkwenye siri ike nke nne ya, taa, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ a na-atọ ụtọ nke enyerela Pulitzer Nrite. Anyị nwekwara ike ịhụ na Bible Neon bipụtara, akwụkwọ akụkọ edere mgbe onye edemede ahụ dị afọ 32.
Kedu ụdị na usoro ya
E kewara akwụkwọ ọgụgụ ahụ na isiakwụkwọ, ndị nke ọzọ na-ekewa ya na obere isi. Ha niile Ha nọ na onye nke atọ na asusu bụ akụkụ nke ederede. Agbanyeghị, enwere akụkụ ụfọdụ ị ga-agụ na onye mbụ, bụrụ ọhụụ Ignatius. Ndị a na-enyere aka ịghọta ma njirimara na akụkọ n'onwe ya. Ndị a bụ akụkụ nke akwụkwọ ndetu ọ na-ede, yana leta ọ na-ede na enyi ya, Myrna Minkoff, onye ya na ọhụụ ya banyere ụwa nwere, mana n'otu oge ahụ na-eche na ọ mezue ya.
Ọtụtụ na-eche nke ahụ akụkọ banyere The Plot of Fools nwere ọtụtụ ndụ John Kennedy Toole, nke na-abịa gosipụta akụkụ nke akụkọ nke ya, ọ bụghị naanị n'ihi ọnọdụ onye ahụ, kamakwa n'ihi ọrụ dị iche iche ọ na-arụ, ma ọ bụ n'ihi mmekọrịta ya na nne ya. Ọbụna ọchịchọ ahụ n'ihi na ihe ọ dere na-arụ ọrụ ịgbanwe eziokwu ma ọ bụ ụwa.
Ugbu a ị matara nke ọma ntakịrị Nzube nke ndị nzuzu, ị ga-ahụ na ọ bụ akwụkwọ mgbe ochie, enwere ike itinye ya n'ọrụ n'obodo a yana n'oge gara aga ma ọ bụ n'ọdịnihu, na agwa ahụ n'onwe ya na-eme ka ị chee ọhụụ ya , ihe ijuanya na obi ọjọọ, nke ụwa. Ugbu a, ma ihe o kwuru ọ̀ bụ na o kwughi ga-adabere naanị n'echiche gị. Yougụgo ya? You ga-anwale ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Conjuju nke ceciuos
Maka onye mgbịrịgba